MADAARKA CASUUSKA: WAA MAXAY, HALKAA LAGA HELAA DIGIR KHAFIIF AH IYO WAXA DHULKU YAHAY DHUL-BEEREEDKA? - SOOSAARKA DALAGGA
Waa maxay basbaaska casaan iyo koritaanka guriga?
Bariis, oo inta badan laga helo isku dar ah leh basbaaska madow iyo cad, ma laha wax la sameeyo.
Berry Tani waa midhaha geedka Shinus, kaas oo sidoo kale loo yaqaanno geedkii basbaas ama basbaaska Peruvian..
Waxaa loo isticmaalaa cunto karinta oo lagu daro dhir udgoon iyo sidii goos gooni ah.
Waxaa loo isticmaalaa ujeedooyinka daaweynta iyo qurxinta.
Waxaad sii baran doontaa war dheeraad ah oo ku saabsan dhirta qalaad ee maqaalkan.
Basbaas khafiif ah - waa maxay?
Bariiska casaanka waxaa laga soo saaraa laba nooc oo ah shinni - jilicsan (Schinus molle) iyo pistachio-leaved (Schinus terebinthifolius).
Miraha geedahan waa kuwo yaryar, wareegsan, jilicsan, lafo adag gudaha.
In muuqaalka waxay u eg yihiin peppercorns, kaliya casaan casaan, taas oo ay ku helay magacooda - basbaaska casaan.
Shinus waa xubin ka mid ah qoyska Sumach. Waxay leedahay qaab geed iyo geed, kora ilaa 6 m.
Shinus jilicsan (mol) - nooca ugu caansan. Geedkan oo leh taajkii dhoobada, wuxuu u eg yahay sariir.
Waxaa ubaxyada ubaxyada ubaxyada, ubaxyada lagu soo ururiyey inflorescences qaab muuqaal ah. Miraha - jebin leh qolof jilicsan.
Wuxuu ka yimaadaa basbaaska casaan ka ah meelaha kulaylaha iyo subtropical ee Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Wuxuu ku koraa Mexico, Brazil, Peru, Guatemala iyo wadamo kale.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa dhirta ornamental oo lagu beeray beeraha iyo jidadka.. Wuxuu si fiican ugu koraa magaalooyinka xeebta.
Uruurinta iyo soosaarka miraha
Kaliya miro aad u bislaaday ayaa la goostay.. Si loo badbaadiyo midabka casaan waa la qalajiyey by lagu keydiyo ama qasacadaysan - la qaado ama la cusbayn. Berry cusub ayaa lagu kaydiyaa wax ka badan lix bilood. Baaskiilada casaanka ah lama soo saarin (sida, tusaale ahaan, madow), maadaama ay tahay mid la isticmaali karo isla markiiba kaddib.
Waxyaabo kale oo ka mid ah midhaha shinus waa saliid saliideed ah. Waxaa laga helaa miraha iyo qaybaha kale ee geedka iyadoo ay ku jirto maaddada "steam".
Taageerida dhirta dhirta taranta ee guriga ayaa buuxin kara taayiradooda dallacaadda. Waxay ku koraan geed geedo qurxoon oo qurxoon, oo, xaaladaha qaarkood, waxay midho dhali doonaan. Waxaa la kori karaa bonsai.
Waa muhiim! Casiirka ee afkoda iyo laamihiisa ee shinusku waa sun ama sunta keenta, waxay keeni kartaa dermatitis, marka lagu daro ubaxyada ubaxu waxay keeni karaan xasaasiyad.
Waa suurtogal in la abuuro taayirro leh miraha - oo leh peppercorns casaan.
Waxaa fiican in suuqa ka iibsan, sida ay u leeyihiin waayo-aragnimada beeraha ubax, waxay leeyihiin biqilka ka fiican.
Ka hor inta aan la beeray, waxay ku qoyan yihiin biyo maalin iyo waxaa lagu beeray qoyaan qoyan-peat isku dar ah 1 abuurka dheriga..
Wixii biqilka wuxuu u baahan yahay heerkul ah ilaa 20 digrii iyo iftiin wanaagsan. Bacriminta macdanta waxaa lagu daraa ciidda (30 g halkii 10 litir oo carrada ah).
Abuuridda abuurka waxay sameeyaan dayrta.
Si Shinos laftiisa u muujiyo dhammaan qurxinta, waa lagama maarmaan in la abuuro shuruudaha.
Xilliga xagaaga, heerkulka ugu fiican ee shinada waa 20-25 darajo, waxay u dulqaadataa si fiican u yareeya heerkulka ilaa 5-10 digrii. Xilliga xagaaga, dhirta waxaa lagu hayn karaa aqalka dhirta lagu koriyo.
Xilliga jiilaalka, waxaa lagula talinayaa in la geliyo aqalka dhirta lagu koriyo oo leh heerkul ah 10-15 digrii. Shinus waa in laga ilaaliyaa qoraalada, laakiin waxay u baahan tahay hawo qaadasho.
Biyaha waraabka si dhexdhexaad ah, xataa xagaaga. Xilliga jiilaalka, waraabinta waxaa loo baahan yahay kaliya ka dib markii ciidda ku qoyaan.. Biyaha leh biyo jilicsan, heerkulka qolka.
Halabuurka carrada ee shinus ma aha mid aad muhiim u ah. Inkasta oo uu dhirta jecel yahay bacrin, hodan ku ah ciidda dabiiciga ah lagu qaso ciid. Waa inay noqotaa dabacsan oo si wacan u miiray, Shinus uma dulqaadanayo qoyaankiisa.
Shinos, oo ah qof ku nool geedka caloosha, wuxuu jecel yahay iftiin dhalaalaya. Wixii isaga u gaar ah, waxaad u baahan tahay inaad doorato meel si ay u iftiimiso, laakiin aan qorraxda tooska ah ee toosan.. Waxaa si fiican u habboon daaqadaha koonfurta, galbeedka iyo bariga. Daaqada koonfureed ee waqtiga fiidkii pritenyayte ubax.
Feed bacriminta bacriminta organic leh content leh nitrogen hooseeyo. Waa inay noqdaan kuwo isku bedelan dhismooyin macdan ah oo loogu talagalay dhirta gudaha. Dharka ugu sarreeya waxaa la sameeyaa oo kaliya xagaaga mar 2-3kii toddobaad kasta.. Inta kale ee sanadka, warshadda aan la bacrimiyo.
Waxay ku beddelaan taayirka kaliya haddii dhererku yaraado isaga. Calaamadaha - isdhex galka xididdada jilitaanka dhulka. Goobta waxaa lagu beddelaa dhererka weyn ee baska, baska baska wuxuu ubaahan yahay sannadle ah qaliin, qof weyni wuxuu u baahan yahay 1 jeer 2-3 sano ...
Waa muhiim! Ha iloobin inaad bedesho substrate inta lagu guda jiro qaliin.
Lagu faafiyo abuurka shinus (oo lagu sharaxay qaybta "Beer iyo beerasho"), gooyn yar iyo dhajinta.
Waqtiga loogu talagalay qaadashada - horraanta gu'ga.
Gooynta waxaa la dhigayaa weel ku jira ciidda bacrin ah oo lagu hayo heerkul aan ka yarayn 20 darajo.
Ka dib markii rooting, waxay ku fadhiisteen dheriyo gooni ah. Mustaqbalka, waa inaad daryeeshaa sida geedka qaangaarka ah.
Ubax iyo fruiting
Inta lagu jiro ubax, dhirtu waxay ka dhigtaa caraf udgoon. Waxay ku duugmaysaa laga bilaabo Abriil ilaa Luuliyo.
Ka dib markii ubax geedis daray. Inta lagu jiro muddadan, jilboolhanka guriga ayaa si gaar ah loogu qurxiyo, iyada oo ay udub dhexaad u yihiin berry casaan ah oo ka soo horjeeda daaqsinka.
Waa muhiim! Miraha cusub ee shinus aan la cunin cunto, waxay yihiin sun
Shinus waxay u dulqaadanaysaa manjooyin. Guriga, badanaa wuxuu u koraa sida liana. Si ay u baadho, waa la gooyn karaa, ka dibna waxay siin doontaa caleemo cusub. Meelaha magaaladu ay ku koraan sida geed cagaaran ama geedka, waxaa badanaa la jarjaraa, ka dibna si qurux badan u koraan.
Dhibaatooyinka iyo Cudurada
Shinos wuxuu ka duwan yahay difaac maskaxeed oo uusan ka cabsaneyn cudurka iyo cayayaanka. Dhibaatada kaliya ayaa noqon karta kallanaato. Waxay ku dhacdaa kiisaska bogga carrada ee dheriga.
Shinus waa warshad adag, isticmaalka qaabka loo yaqaan 'seasoning' waa mid gaar ah oo aan had iyo jeer badqabin.
Meelaha koritaanka dabiiciga ah, waxaa si weyn loo isticmaalaa cuntada.
Cuntooyinka badan ee qaranka sida nacnaca, cabitaanka, macmacaanka ayaan sameynin iyada oo aan kaqeybqaadan..
Waxay leedahay dhadhan macaan iyo dhadhan leh oo leh talooyin dabiici ah, juniper iyo calaamad muujinaya guntiga ka dib.
Maadaama miro lagu daro kalluunka, khudradda, cuntada badda iyo hilibka. Waxay ka buuxsamaan salad iyo ku dar foosto.
Waxaa ku jira rootiga "4 basbaas" oo ay la socdaan madow, caddaan iyo cagaar.
Laabashada casaan-gaaban ayaa dhif u ah dhadhan iyo dhadhan. Si aad u kiciso, qoyaan digirta qalalan qalalan kulaylka dhexdhexaadka ah.
Baaskiilada casaanka ah waxaa loo isticmaalaa isla markiiba ka dib marka la jiido, haddii kale waxay gebi ahaanba lumisaa dhadhanka.
Isticmaal saliid muhiim ah
Saliidaha muhiimka ah ayaa ku jira dhammaan qaybaha dusha. Waxay si weyn u isticmaalaan kondomoolojiyada, maadaama ay leeyihiin bogsasho, anti-cellulite, adkeynta iyo saameynta tayada. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo herpes, finan, dermatitis iyo timo lumis..
Intaa waxaa dheer, saliidda waxaa loo isticmaalaa in la qubaysto, duugo, lagu cadaadiyo iyo kobcinta kiriimka.
Sida dhirta daawada, basbaaska casaan waxaa loo isticmaalaa daaweynta arthritis, laabotooyinka, wadnaha iyo neefsashada. Isticmaalka tiro yar ayaa caadiyan u shaqeeya nidaamka habka dheef-shiidka, waxay ka caawisaa shubanka. Waxay leedahay antimicrobial iyo tonic properties..
Fiyuusta fitamiinada (C, B, PP iyo E) iyo macdanta (potassium, calcium, magnesium, zinc, iwm)
Ha isticmaalin basbaaska casaan ee dadka u nugul xasaasiyad. Tirada badani waa sun.
Horumarinta basbaaska casaan ee guriga ayaa suurtagal ah oo kaliya ujeeddo qurxoon. Sida xawaashka, waxaad isticmaali kartaa oo kaliya miraha la warshadeeyey habka warshadaha.
Akhriyaha oo xiiseynaya basbaaska casaan wuxuu xiiseyn karaa akhrinta noocyada kale ee basbaas iyo macluumaad guud oo ku saabsan:
sharaxa, noocyada iyo sifooyinka wanaagsan ee warshadda;
sii kordhaya ee lagu koriyo ah.